Waxaad isku dabbari kartaa waddan qaali ah, marka aad shaqo hesho - Asylum in Finland
Ammaanka bulshada ee Finland waa fiican yahay: dugsiyada iyo daryeelka caafimaadku waa lacag la’aan, dadka aan shaqada heysanna dowladda ayeey kaalmo uga helayaan noloshooda. Yoolka la hiigsanayo waa in qof kasta uu helo fursad uu ku horumariyo hufnaanta bulshada. Nin Afghanistan asal ahaan ka soo jeeda oo Finland muddo dheer deganayaa ayaa qaba in qaar ka tirsan dadka megangelyo-doonka ah ay arrintan qalad ka fahamsan yihiin.
”Kaalmada nolosha ee qofka aan shaqeyn ma ahan mushaar mana ahan wax joogto ah. Waa habka ugu dambeeya ee qofka, waa wax ku meelgaar ah waxeyna u dhigantaa tuugsiga ama dawarsiga dalalka Islaamka ah. Dadka shaqeeya ayaa canshuur ahaan u bixiya, waa lacagta muwaadiniinta”, sidaas ayuu isu barbardhigayaa.
Siyaasadda Finland waxaa ka mid ah in bulshadu ay taageerto dadka ku jira heerka liita. Tusaale ahaan kaalmada uu helo qofka aan shaqada heysan waa in ay ku filnaataa baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha. Danta laga leeyahay waa in uu qofku dhaqaala ahaan ku sii noolaado inta uu shaqada raadinayo. ”Lacagta shaqo la’aantu waxba kuma filna. Fursadda kaliya ee Finland la iskula dabbari karo waa in aad naftaada shaqo u hesho. Gaar ahaan waqtigan hadda la joogo oo la jaray kaalmooyin bulsheed badan”, nin Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo deggan Finland ayaa sidaas yiri.
Shaqo sameyn ayaa lagu noolaan karaa
Nolosha Finland waa ka qaalisan tahay heerka dhexe ee Yurub. Finland waxey sanadki 2017 isbarbardhigga Yurub ee heerka qiimaha ka gashay sideed.
”Dharka, safarka, cuntada iyo deegaanka, dhamaantood waxaa ku baxa lacag aad u badan”, nin Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ayaa sidaas yiri.
”Haddii labo qofood oo qaangaar ah ay qoyska ka shaqeeyaan, noloshu waa wanaagsan tahay. Haddii hal qof oo kaliya uu shaqeeyo, dhaqaale ahaan noloshu wey adkaan kartaa”, Nin Afghanistan ka soo jeeda oo Finland sanado badan deganaa ayaa sidaas yiri.
Naag asal ahaan Ciraaq ka soo jeedda oo Finland deganeyd muddo 20 sano ka badan ayaa ogaatay in qaar ka tirsan dadka megangelyo-doonka ah ay sawir qaldan ka heystaan ammaanka bulshada ee Finland. Sida ay sheegtay qaar ayaa u maleeya in dowladdu ay dadka iska siiso lacag bilaasha ah.
”Ujeedadu waa in uu qofku noloshiisa baxsadaa, waxaana la taageeraa oo kaliya dadka dhibka ku jira”, sidaas ayeey ku saxday.
”Finland canshuurtiisu waa xooggan tahay, qof kastana – xittaa qofka – aan shaqeyn wuxuu dakhligiisa ka bixiyaa canshuur si ay hufnaanta bulshadu u dhalato.”
Qaabab badan ayaa Finland looga taageeraa shaqaaloobista waxaana si gaar ah loo dhiirigeliyaan firfircoonaanta qofka. Sida ay Finnish badan qabaan rabitaanka shaqo sameyntu waa wax wanaagsan oo aan ku tiirsaneyn jinsiyad ama asal dhaqan.
”Finnishku waxey qadariyaan qofku shaqadiisa ku noolaada, laakiin ma qadariyaan qofka muddo dheer ku noolaada lacagta sooshalka”, nin Kurdi asal ahaan ka soo jeeda ayaa sidaas yiri.
Shaqaaloobistu waxey u baahan tahay la-qabsasho
Helitaanka shaqadu waxey qaadan kartaa waqti gaar ahaan dadka soo-galootiga ah, waayo inta badan waxaa shardi ah aqoonta afka Finnishka. Finland shaqaaloobistu ma ahan wax fudud haddii xittaa uu shaqo-raadiyuhu leeyahay xirfad diyaar ah.
”Inta badan qofka soo-galootiga ah waa in uu Finland wax ku bartaa islamarkaasna waqtiga la-jimeeyaa aqoontiisa. Sidaas darteed waxaa laga yaabaa in ay qasab kugu noqoto in aad muddo dheer raadiso shaqo aadanna helin shaqo u dhiganta xirfaddaada. Dad badan waxey ku noqon kartaa lama filaan weyn”, nin Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo Finland muddo dheer deganaa ayaa sidaas yiri.
Nin Afghanistan ka soo jeeda ayaa la kulmay dhibaatooyinka helitaanka shaqada, laakiin ugu dambeyn dadaal hawlkarnimo leh ayuu kula guuleystay. Wuxuu sheegay, in dadka Finland u soo guuray ay shaqooyinka uga meermeeraan sababo dhaqan oo qalad ah. Ninku waa Muslim wuxuuna dadka xusuusinayaa in khamriga diintiisa lagu mamnuucay ay qeyb ka tahay dhaqanka iyo nolol-maalmeedka Finland ayna soo geleyso shaqooyin badan.
”Ma shaqeyn kareysid, haddii aad ku fikireyso uun, in meeshaas lagu gado khamriga macmnuuca ah iyo hilib doofaar. Haddii shaqadan aysan kuu cuntamin sababtee ayaad u qaadaneysaa lacagta sooshalka”, isagaa isweydiiyay islamarkaasna sababeynaya:
”Kaalmooyinka lagu bixiyo Finland waxaa qeyb ka mid ah laga soo uruuriyay canshuurta laga helo hilibka doofaarka iyo khamriga, sidaas darteed waa in aan markaasna la qaaday kaalmada.”
qoys dhaqaalaha nolosha shaqo